Driver | Golden Elite Co.,Ltd. ﻿
11.7.2019, Full time , Design / Decoration
Company: Golden Elite Co.,Ltd.
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	အသက် ၂၁ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	(ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း) အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	ကိုရီးယားပါကေးအရောင်းအတွေ့အကြုံ ရှိပါက ဦးစားပေးခန့်ထားမည်။
•	အရောင်း Target ပြည့်မီအောင်ရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location အမှတ်(၉၄)၊ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
153 Days, Full time , Design / Decoration
169 Days, Full time , Design / Decoration
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးခန့်ထားမည်။ •	အရှေဒဂုံ မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ Sales Promoter(Showroom)
Team Leader (ကိုရီးယား ပါကေး ကျွမ်းကျင်)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်တတ်ပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Senior Sales & Marketing(Senior Staff)
199 Days, Full time , Design / Decoration
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးခန့်ထားမည်။
•	ကိုရီးယား ပါကေး အရောင်းအတွေ့အကြုံ ရှိပါက ဦးစားပေးခန့်ထားမည်။ •	အရောင်း Target ပြည့်မီအောင် ရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Sale & Marketing (Senior Staff)
•	ကိုရီးယား ပါကေး အရောင်းအတွေ့အကြုံ ရှိပါက ဦးစားပေးခန့်ထားမည်။
418 Days, Full time , Design / Decoration
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်တတ်ပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
Driver Driver, Security & Cleaning jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Golden Elite Co.,Ltd. Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Driver Jobs in Myanmar, jobs in Yangon